Shandura webhusaiti yeWordPress | Gtbabel
Nzira yakanakisa yekugadzira yako WordPress saiti mitauro yakawanda: yakakwana kune ese ari maviri akapusa uye akaoma mawebhusaiti. Nerubatsiro rweshanduro dzemagetsi dzaunokwanisa kudzokorora sezvaunoda.
Shandura webhusaiti yako izvozvi
Iyo plugin yekushandura yemunhu wese
Nerubatsiro rwemhinduro yedu, unogona kushandura yako WordPress webhusaiti mune chero nhamba yemitauro pasina nguva zvachose. Izvi zvinokutendera kuti uwedzere kufambiswa kwedata repasirese, kusvika kune vateereri vepasirese uye kuvhura misika mitsva: Pasina kuunza mitengo yakakwira yekuvandudza kana kuedza kugadzirisa. Mhinduro yedu inopa anoyevedza mabasa kune vese vanotanga uye nyanzvi dziri yechipiri kune chero.
Yedu yekuseta wizard inokuendesa iwe kune yemitauro yakawanda webhusaiti mumaminetsi mashanu. Pasina ruzivo rwekugadzira kana kugadzirisa kune yako dingindira. Kana yangomisikidzwa, zvitsva zvemukati zvinogona kududzirwa otomatiki kana zvichidikanwa: Uye iwe unogona kutarisisa kugadzira zvinyorwa zvitsva.
Inotarisisa zvese zvinodiwa kune yakanaka, SEO-yakagadziridzwa webhusaiti yemitauro yakawanda: Kungave kududzira kwezita, tsananguro yemeta, slugs, hreflang tags, HTML refu hunhu: Google ichafadzwa. Isu zvakare inopindirana nehukuru SEO plugins.
Kune vese nyanzvi, isu tinopa mabasa akadai se XML/JSON dudziro, e-mail zviziviso, e-mail/PDF dudziro, kutumira kunze / kunze mune akawanda mafaera mafomati, kuchinjika kune akasiyana masevhisi ekushandura uye nezvimwe zvakawanda izvo pasina imwe plugin pamusika inopa. .
Isu ndisu chete plugin mhinduro inopa otomatiki shanduro yezvako zviripo - nekudzvanya kwebhatani. Kune yega yega shanduko yemukati, iyo otomatiki email yekuzivisa sevhisi inokuzivisa iwe nezve shanduko dzese dzakaitwa mumutauro weko. Uye kana uchida kuti shanduro idzi dzivandudzwe nekambani yekushandura, unokwanisa kutumira shanduro dzese otomatiki mumafomati akasiyana wobva waaunza zvakare nekubaya bhatani.
Kuenzanisa nemamwe mitauro yakawanda plugins
Kusarudza tekinoroji chaiyo kwakakosha kune imwe-yekutanga uye inoenderera mberi mutengo wekusimudzira uye kubudirira kweprojekiti, kunyanya kumapurojekiti makuru ewebhu. Iyo yakamiswa plug-in mhinduro pamusika ine akasiyana tekinoroji maitiro uye neayo ane zvakanakira nezvaakaipira. Mhinduro yedu inogutsikana nemhando yepamusoro yezvimiro uye inosanganisa zvakanakira zviripo plugin mhinduro pamusika weWordPress.
Shandura peji rese
Mumwe nemumwe anogona kuwedzera
Sevhisi yekushandura yega
Nyika chaiyo LPs
Mutengo wepagore pamuenzaniso (approx.) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
Inoenderana nemapulagi ako, madingindira uye maraibhurari
Tanga kushandura webhusaiti yako nhasi
Ingave webhu saiti, kambani yekushambadzira, dhizaini yekushandura kana mutengi wekupedzisira: Tine pasuru yakakodzera yezvese zviitiko mupotfolio yedu: Neyemahara vhezheni kusvika kune rezinesi rebhizinesi rega, sarudzo dzese dzakavhurirwa iwe - uye nemutengo unoyevedza zvakanyanya. Sarudza pasuru yakakodzera iwe uye shandisa yakazara mitauro yakawanda muwebhusaiti yako nhasi.
Ye 1 webhusaiti
€ 149 pagore
Yese PRO inobatsira
Kune chero nhamba yemawebhusaiti